smilies..ထည့်မရခြင်း.. — MYSTERY ZILLION
December 2008 edited December 2008 in Idea
ကျွန်တော် post တင်တိုင်း..smilies ပုံလေးတွေတင်မရဖြစ်နေတယ်..
ကျွန်တော် post လေးတွေ မျက်နှာပြောင်လေးတွေဖြစ်နေလို့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြပါခင်ဗျာ..http://www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies/4.gif အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာဗျို့...
Bro's link မှာ ကျနော်သွားကြည့်တာ .... အကောင်းအတိုင်းပါပဲဗျ ........ ကျနော့်စက်မှာတော့ပေါ်တယ် ... Bro စက်မှာဘယ်လိုမပေါ်တာလဲ ???
: ) ... : P <<< အဲလိုလေးတွေဖြစ်နေတာလား ...........
တန်းပြီးစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ပေးတဲ့အတွက်..ko Alexander ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကျွန်တော်စက်မှာ..smilies သုံးလိုက်တိုင်း..http://www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies/13.gif ......http:www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies web လိပ်စာကြီးနဲ့ပဲပေါ်တယ် ရုပ်ပုံလေးတွေမထင်ဘူးဖြစ်နေတယ်..အစ်ကိုစက်မှာရုပ်ပုံပေါ်တယ်
ဆိုရင်တော့..အံ့သြစရာပဲဗျ...ဘယ်သူမှမပြောပဲလုပ်နေတာကြာပြီ..မရလို့ post တင်လိုက်တာပါ..http://www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies/13.gifhttp://www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies/77.gifhttp://www.mysteryzillion.org/forums/images/smilies/77.gif
Bro ... ဒါဆိုရင်တော့ ... Admin or MawMaw တွေကို ပဲမေးကြည့်လိုက်ပါ။
ဘယ် setting တွေ change ရမယ်ဆိုတာ သူတို့ပြောနိုင်မှာပါ။
ကျနော့်မှာလဲ problem တစ်ခုတော့ရှိနေသေးတယ် ...........
Internet က Photo တွေကို Post ထဲကို Drag ဆွဲချရင် .... အဲဒီပုံတွေမပေါ်ပဲ ... Link ပဲပေါ်တယ် .... ဒီလိုလေး ........
အဲဒါ ရော ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ..... ပြောကြပါဦးနော့ ......... :77::77:
( သူများအတွက်၀င်ရေးရင်းနဲ့ ကိုယ့်အတွက်ပါရေးဖြစ်သွားပြီ .... )
ကိုAlexander ရေ photo ထဲ့ချင်ရင် အပေါ်က"Insert Image" ကို clickပြီးအကိုထဲ့မဲ့ပုံရဲ့လင့်ခ်ကိုဖြည့်လိုက်ရင်ရပါပြီ....
Thanks ပါ။ Bro ပြောမှသတိထားမိတယ် .... "Insert Image" ဆိုတဲ့ Button ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး ... ကျနော်လေ့လာမှုအားနည်းတာကိုပြောတာ .... :71:
ခုတော့ Brother ကျေးဇူးနဲ့ ပြန်လန်းလို့ရပြီ ... ဟီဟီ ...
ကျေးဇူးပါ ..... :77:
[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/Honey/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.jpg[/IMG] ပုံထည့်တာ..အပေါ်က ဘော်ဘော် တွေပြောသလိုရမရစမ်းကြည့်လိုက်တာနော်..